Reer Waqooyi ma Beel baa mise waa Gobol ka mid ah 18kii Gobol ee Soomaaliya? – Xeernews24
Tusaale haddaan u soo qaadano gobolka Sanaag. haddii Gobolaysi wax lagu qaybsanayo beesha Warsangeli waa beesha ugu degmooyinka badan gobolka Sanaag. Sidaas awgeeed doorashada ka socota Xalane ee loo tartamayo kuraasta aqalka sare ee gobolka Sanaag waa inay la mid noqotaa doorashaddi ka dhacday ama ka socota guud ahaan Soomaaliya , oo ahayd in labo qof oo hal beel ka soo wada ay iyagu wada tartamayeen. Waa in hal kursi oo ka mid ah xildhibaanada Aqalka sare ee Gobolka Sanaag uu noqdaa mid ay u wada tartamayaan labo Qof oo ka soo wada jeeda Beesha Warsangeli. Iyada oo la xeerinayo in beeshu horay u fulisay qoondadii dumarka oo ay labo Xildhibaan oo dumar ah soo doorteen oo ay Muqdisho u direen.
Siyaasiga ka soo jeeda Beesha Warsangeli oo Xildhibaanka Aqalka sare ee gobolka Sanaag kula tartama beelaha Qori jarato, Cimraan iyo Sanbuur. isaga oo kursigan ka dhigaya Kursi ka wada dhaxeeya reer waqooyi, oo beri muran la gelinayo haddi ay taasi dhacdo wuxuu la mid yahay Danaystayaashii damaca waalnaa oo Gobolka Sanaag ka dhigay in maanta loogu yeero dhulka laysku haysto. Ka dib markii ay Hargaysa u hunguri doonteen, oo Bulshada Caalamka u sheegeen inay ka tirsan yihiin maamulka Beelaha iSAAQ SAMAYSTEEN
Ugu danbayntii Bulshada reer Maakhir oo Xildhibaankoodii hore ee Aqalka sare laga soo xawilay Koonfurta Soomaaliya iyaga oo aan dooran oo aan aqoon fiican u lahayn , In maantana Xildhibaankii Kale oo Jiho reer Waqooyi Wataa in loo soo xawilo waxa keenay waa la xisaab la’aanta Isimadooda iyo maamulka ay ka tirsan yihiin. Maxaa markii hroeba keenay in labada Xildhibaan ee reer Maakhir lakala qaado oo Maareeye iyo Xasab Culusoow inoo soo xawilaan
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/12/images.png 118 200 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-12-01 21:34:312016-12-01 21:34:31Reer Waqooyi ma Beel baa mise waa Gobol ka mid ah 18kii Gobol ee Soomaaliya?
Fidel Castro Iyo Dagaalkii 1977-kii, W/Q: Cali Cabdi Coomay Ganacsato Jabuutiyaan ah oo Deeq gaadhsiiyay Dadka ku abaaraysan Buuhoodle ...